Fantaro i Justin Sègbédji Ahinon, mampiatrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 25 Septambra – 1 Oktobra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2019 6:58 GMT
Amin'izao taona 2019 izao izay ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera, hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Justin Sègbédji Ahinon (@justinahinon1) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Justin Sègbédji Ahinon no anarako. Raha ny marina dia olona vitsy monja no mahafantatra fa misy hoe Sègbédji ihany koa amin'ny anarako, fa ho an'ny ankamaroan'ny olona dia Justin Ahinon fotsiny ny anarako. Mahatsapa aho fa mila mampiasa hatrany ny anarana Sègbédji ary hilaza izany hatrany amin'izay olona manontany ny anarako roa taona lasa izay.
Nianatra Antontanisa nahatra sy Toekarena aho. Ary amin'izao fotoana izao aho manamboatra ny web (izany hoe asa ao amin'ny web/sy ireo karazana tetikasa nomerika) ao Sèmè City, faritra ara-toekarena manokana ao Benin amin'ilay mampavitrika fampiasam-bola sy famoronana asa amin'ny alalan'ny fanabeazana ambony kokoa , fikarohana siantifika ary ny fikotrehana fihariana vaovao; raha noheverina aho tany am-boalohany fa tsy hiditra amin'izany asa injenieran'ny rindrambaiko/web izany.
Mirotsaka ihany koa aho amin'ireo fanorenana asa amin'ny siansa misokatra/fahafaha-miditra malalaka eto Benin sy eto Afrika, toy ny AfricArxiv, fametrahana nomerika ho an'ny votoaty Afrika/Afrikana manokana, AfricaOSH, famoriana olona hampiroborobo ny siansa sy rindrambainga misokatra eto amin'ny kaontinanta, na ny Idemi Africa, fanorenana asa hanamafisana ny fisiam-botoaty amin'ny fiteny afrikana ato amin'ny web.
Miteny Fɔ̀ngbè aho, fiteny iray be mpampiasa ao Benin, Togo, ary ny faritra sasany ao Nizeria.
Horesahako manokana ny famokarana votoaty sy ny fitantanana ny fitaovana tahaka ny Medium, Tumblr, WordPress (maro bebe kokoa); sy ny fomba ametrahana azy ireny mifandraika amin'ny votoaty fa tsy ireo efa be mpiteny (frantsay, anglisy, Arabo na espaniola) sy ny fomba ahatraran'ny olona te-hamokatra votoaty ao ireo sehatra ireo amin'ireo fiteny ireo.
Nandritra ny fotoana maro aho ninia tsy te-hahalala sy tsy nampiasa ny tenin-drazako. Nahita aho taty aoriana fa mety hanjavona ny fiteny sasany, ary nisy aza ny fiteny sasany efa nanjavona toy ny any amin'ny faritra Karaiba, Amerika Avaratra na atsimon'i Afrika satria tsy ampy ny fanaovana azy ireny ho ampiasaim-bahoaka. Ary tsilo matanjaka iray ho amin'ny fampiroboroboana ireny fiteny ireny ny aterineto ka te-hampiasa ny talentako sy ny haizatrako aho hahatonga azy ireny ho tsara toerana kokoa. Ny firotsahako ho amin'izay fotokevitra izay anefa dia lalana iray amin'ny fakako ho ahy ny fiteniko, ara-tantara, ara-kolontsaina sady manao famahoahana azy miaraka amin'ireo fiteny hafa tsy ampy fisoloantena aty amin'ny tranonkala.